Jery taratra… herinandro : hafa izay iainan’ny vahoaka | NewsMada
Jery taratra… herinandro : hafa izay iainan’ny vahoaka
Vahiny indray andro teto Madagasikara ny filohan’i Torkia, Recep T. Erdogan. Nifantoka betsaka amin’ny lafiny toekarena ny fitsidihana, nisian’ny fanaovan-tsonia fiaraha-miasa. Voaresaka koa ny amin’ny ady amin’ny fampihorohoroana.
Eo koa ny sekreteram-panjakan’i Vatikana, ny kardinaly Pietro Parolin, hankalaza ny faha-50 taon’ny fifandraisana diplaomatika eo amin’i Vatikana sy i Madagasikara. Misy ny fihaonany amin’ny mpitondra fanjakana sy ny mpitondra fiangonana katolika.
Hanohy ny fampihavanana ny FFKM, araka ny “F” efatra: fiaiken-keloka, fibebahana, fahamarinana, fihavanana. Andrasana ny lalàna momba ny fampihavanana. Napetraka ny vato fehizoro ny trano foiben’ny FFKM eny Ankorondrano.
Nihemotra ho faha-145 amin’ny firenena 176 amin’ny ady amin’ny kolikoly i Madagasikara, taona 2016, raha ny tatitry ny Transparency International-IM. Faha-123 tamin’ny firenena 168 izy ny taona 2015. Nisy fihemoran-daharana 22.
Nilaza ny filohan’ny HCC fa maika ny fametrahana ny lehiben’ny mpanohitra eny amin’ny parlemanta. Andrasana ny didy fampiharana, fa tsy mazava ny dingana arahina. Hanasazy ireo tsy mety hanao fanambaram-pananana ny HCC.
Tsy nisy nilaza fihatsaran’ny fiainam-pirenena sy ny vahoaka izay naneho hevitra momba ny fahatelo taon’ny fitondrana Rajaonarimampianina. Miharatsy andro aman’alina izany noho ny kolikoly, tsimatimanota, fampihorohoroana…
Amin’izany, hafa izay iainan’ny vahoaka: misondrotra vidin’ny vary, anana… Nilaza hanondrotra ho 500 Ar ny saran-dalan’ny taxi-be, Antananarivo Renivohitra, manomboka ny volana ambony, ireo kaoperativam-pitaterana.
Raharaha iainan’ny olona koa ny firongatry ny fitsaram-bahoaka: ny tany Besalampy, ohatra, raha efa nilamindamin-dratsy ny tany Vangaindrano. Eo koa ny tsy fandriampahalemana an-tanàn-dehibe sy eny ambanivohitra.
Mitohy ary mihalava ny delestazy. Andrasana hatrany ny firotsahan’ny orana aty afovoan-tany, na voajanahary izany na alatsaka. Na nanomboka nisy aza izany amin’ny faritra Alaotra Mangoro sy Analamanga, ohatra: tsy mahafa-po.